महामारीको कारण विश्व अर्थतन्त्रहरुको अवस्था भयवाह हुन सक्छ : आईएमएफको चेतावनी – Sajha Pati
scroll • अर्थ / पर्यटन
महामारीको कारण विश्व अर्थतन्त्रहरुको अवस्था भयवाह हुन सक्छ : आईएमएफको चेतावनी
नयाँ दिल्ली । कोरोनाभाइरस महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई पछाडि पारि सकेको छ । गरिब देशहरूलाई सहयोग गर्न अब विश्व बैंक र अन्र्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई दबाब सिर्जना भएको छ । वर्तमानको महमारीका कारण सिर्जना भएको मन्दीको रिपोर्टले संसारले कसरी यसको सामना गरिरहेको छ भनेर बताउँछ । अहिलेको अवस्था भनेको एकदमै गाह्रो समय हो किनभने १९२० को दशको शुरुवातमा र १९३० दशकको अन्तिम अन्तिमतिर विश्वमा सबै भन्दा ठूलो आर्थिक मन्दीको अवस्था पछि कसैले पनि अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्थाको अनुभव गरेका छैनन् ।
कोरोनाभाइरसले मात्र तीन महिनामा अर्थतन्त्रको स्थितिको पूर्ण परिवर्तन गरेको छ । जनवरीमा, आईएमएफ (अन्र्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष) ले २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र करीव तीन प्रतिशतले वृद्धि हुने भनेको थियो तर अहिले उनीहरूले अर्थतन्त्र डुब्दै छ भनिरहेका छन् । आईएमएफका अनुसार यस वर्ष विश्वव्यापी अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।
सर्वप्रथम दक्षिण एशिया को अवस्था हेरौं : आईएमएफका अनुसार २०२० मा वृद्धि दर शून्य हुनेछ, जुन २००८ को आर्थिक संकटभन्दा पनि खराब हो । १९९०को दशकमा मुद्रा संकट इस्टर र दक्षिण एशियाको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटको समयमा पनि अर्थतन्त्र एक प्रतिशतले अलि बढेको थियो ।
अब ल्याटिन अमेरिकामा एक नजर : आईएमएफको अनुमानमा अहिले विगतका बर्षहरुमा सबै भन्दा खराब मन्दी हो । दक्षिण अमेरिकामा करीव ३३ प्रतिशत व्यक्तिले आफ्नो जागिर गुमाउन सक्दछन् । जसको मतलब २०० मिलियन भन्दा बढी मानिस बेरोजगार हुन सक्छन् । अफ्रिकामा पनि यस्तै अवस्था छ । यदि अब केही गरिएन भने, लगभग ५० प्रतिशत मान्छे को रोजगार हराउनेछन् वा बेरोजगार हुन बाध्य हुनेमा कुनै शंका छैन ।
विकसित अर्थतन्त्रहरूको लागि अवस्था अझ निराशाजनक देखिन्छ । आईएमएफको अनुमानमा यस वर्ष यी देशहरूको अर्थव्यवस्था कम्तिमा ६ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । यस त्रैमासिकमा बेलायतको अर्थतन्त्र ३५ प्रतिशतसम्म झर्न सक्छ । दुबै विकसित र विकासशील अर्थतन्त्रहरूको बारेमा कुरा गर्दै, कुल उत्पादन घाटा ९ ट्रिलियन डलर हुन सक्छ ।
यी खर्चहरू कसले वहन गर्ने छन ? आईएमएफको योजना के हो ?
हालसम्म, आईएमएफले ९ ट्रिलियन डलर उठाएको छ । तर त्यहाँ सार्वजनिक आयको अभाव छ, विशेष गरी गरीब देशहरूमा । विकासोन्मुख देशहरूलाई सहयोग पु¥याउन करीव २ ट्रिलियन डलर आवश्यक पर्दछ । आईएमएफले विभिन्न देशहरुबाट ११ अरब डलर प्राप्त गरिसकेको छ । यी देशहरू जापान, बेलायत, फ्रान्स, क्यानडा र अष्ट्रेलिया हुन् । उता जी–२० देशहरूले भुक्तानीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । जसले गरिब देशहरुलाई कम्तिमा २० अरब डलर महामारी संग लड्न मद्दत गर्ने गर्दछ ।
नेपालको लयनिजममा पहिलो पटक आनलाईन पब्लिक स्पिकिङ्ग कोर्स सञ्चान
पौने दुई करोड जनसंख्या भएको देश इक्वेडरमा शबहरु चिसो कन्टेनरहरू राख्न बाध्य
The stock market and home values are back at record highs, while jobs remain scarce for those earning...